Volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka any Thailandy: manahy ny indostrian'ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka any Thailandy: manahy ny indostrian'ny fizahantany
Aogositra 19, 2013
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany Thai dia mazava fa manahy ny amin'ny fivoarana vao haingana ao amin'ity tany feno tsiky ity.
Tao anatin'ny andiana dinidinika tato ho ato ireo antoko politika dia niomana ny amin'ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka nomen'ny governemanta. Betsaka ny mpanohitra, tarihan'ny Antoko Demokraty, miaraka amin'ny fanohanan'ny 'herin'ny vahoaka' matanjaka, no mino fa fisolokiana ilay lalàna naroso mba hamelana ny PM teo aloha Thaksin Shinawatra, miaina an-tsesitany, ary afaka mivoaka am-ponja ary afaka manao izany. tapakila mody.
Mizara roa lalina ny firenena ary mitombo ny fahatsapana. Raha toa ka mihazakazaka ny volavolan-dalàna dia azo antoka fa hiparitaka eny amin'ny araben'i Bangkok indray ny fihetsiketsehana.
Sehatra mampiahiahy ho an'ny indostrian'ny fizahantany mafampana ao Thailand. Amin'izao fotoana izao dia mankafy fisondrotana ny fizahan-tany miaraka amin'ireo mpizahatany iraisam-pirenena 24m antenaina hitsidika ilay Fanjakana amin'ity taona ity, tafakatra 28m amin'ny 2014.
Betsaka ny mpanara-maso ny indostria no manahy sao hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahatokisan'ny mpizahatany ny fihetsiketsehana mitohy sy maharitra. Adino haingana ny fihetsiketsehana an-dalambe ary vetivety dia fohy ny fihenan'ny isan'ny mpizahatany. Na izany aza ny hetsi-panoherana vao haingana tany Egypt sy any an-kafa dia tsy azo antoka ny fihetsika momba ny fizahan-tany ho avy ary mety tsy ho sitrana mora foana.
Nilaza ny Demokraty fa tsy hiala amin'ny fanoherana ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka.
Andriamatoa Suthep Thaugsuban solombavambahoaka demokratika ho an'ny Surat Thani dia nanamafy ny hevitry ny antoko momba ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka ary nanameloka ny fivondronana fanavaozana politika natolotry ny praiminisitra Yingluck Shinawatra.
Ny praiminisitra Yingluck Shinawatra tamin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana dia manizingizina fa tsy saribakoly Thaksin Shinawatra anadahiny izy, hoy i Yingluck fa tsy manatona ny rahalahiny amin'ny olana rehetra araka ny vinavinan'ny besinimaro izy. Ny fanapahan-keviny manokana dia nifototra indrindra tamin'ny torohevitra sy tolo-kevitra avy amin'ireo mpanolotsainy sy tompon'andraikitra amin'ny fanjakana ary ny antokon'ny fivondronana fanavaozana politika dia ny ati-dohany.
Ny heviny fa tsy an'i Thaksin dia ny fanasana ny praiminisitra britanika teo aloha Tony Blair sy ny sekretera jeneralin'ny UN teo aloha Kofi Annan hanatrika fivoriana fampihavanana. Nandà tsy hiditra Andriamatoa Annan ary nilaza fa nanolo-tena tany an-toeran-kafa.
Nilaza izy fa mikendry ny hanokatra ny firenena amin'ny fomba fijery hafa ny valan-dresaka amin'ny fiezahany handresy ny fisaratsarahana sy hahazoana ny fampihavanam-pirenena.
Nilaza ny governemanta fa mikasa ny hanasa ny Antoko Demokraty hanatevin-daharana ny fivoriambe fanavaozana.
Andriamatoa Suthep, na izany aza, dia nilaza fa raha nandray anjara tamin'ny fivoriambe ny antoko dia hanome ny governemanta ny ara-dalàna tadiaviny izany.
Andriamatoa Suthep dia mino fa ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka, raha lany, dia hihoatra ny fahefan'ny fitsarana.
Ny antoko dia hikatsaka ny hanongana ny governemanta tarihin'i Pheu Thai raha tsy efa mazava fa nandrava ny lalàna ny governemanta.
Nilaza Andriamatoa Suthep fa nanaiky ny hiandry mandra-pahatongan'ny volavolan-dalàna ny famakiana telo rehetra alohan'ny "fitsofana kiririoka" hanombohana fihetsiketsehana marobe.
Niaro ny hetsika Andriamatoa Suthep ary nilaza izy fa tsy mikasa ny handrisika ny korontana imasom-bahoaka ny antoko.
Tsy liana tamin'ny fanilo trano na fanaovana takalon'aina ny tanàna izy ireo.
Nilaza izy fa mety hanao famoriam-bahoaka marobe, fampiatoana asa, tsy fankatoavana sivily, fanaovana ankivy ny vokatra mifandraika amin'ny tarehimarika avy amin'ny governemanta, na diabe mankany amin'ny tranon'ny governemanta.